Umaka: inzalo | Martech Zone
NgeSonto, ngoJulayi 6, i-2014 NgeSonto, ngoJulayi 6, i-2014 Douglas Karr
Sabelane ngamanye ama-infographics kuzinto zokuqukethwe kwegciwane futhi ngihlala nginqikaza ukusunduza igciwane njengecebo. Okuqukethwe okunegciwane kungaletha ukuqwashisa ngomkhiqizo - sikubona lokho kaningi ngamavidiyo. Kodwa-ke, angikaze ngibone noma ngubani eyishaya ngaphandle kwepaki njalo. Abanye bazama kanzima, abanye bayasilela… kuyinhlanganisela yethalente nenhlanhla okwandisa okuqukethwe kwakho ngokufisayo. Lokho kusho, ngikholwa ukuthi amaqhinga asetshenzisiwe lapho kugxilwe